Nahazo mpanazatra sy mpitsara vaovao ny teto Analamanga - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Amin’izao dia efa miomana amin’ny fifaninanam-pirenena. Taorian’ireny fihibohana teo ireny dia nahavita iny fanofanana mpanazatra iny ary mbola hanao izany koa ny any amin’ny faritra. Ny tena zava-dehibe koa efa miomana sahady amin’ny lalaon’ny Nosy manaraka amin’ny 2023 ny federasiona ny ady totohondry. Atao izay ahazoana meday betsaka indrindra fa indrindra ny meday volamena. Manaraka izany, izay nahazo meday amin’io lalaon’ny Nosy io no manohy ny fanomanana ny lalao olympika amin’ny 2024 atao any Frantsa. Niaraha-nahita ny fahombiazan’ny taranja ady totohondry teto amintsika, saika izy hatrany no nitondra medaly maro ho an’ny Firenena. Izay no isany nandraisan’ny mpitarika ao amin’ity federasiona ity amin’izao ezaka ataony izao mba ahazoana vokatra tsara.
Tonga nanatrika izao fotoana izao ihany koa i Jean Nirina Rafanomezantsoa, filohan’ny Fitrama, niaraka tamin’ireo mpiara-miasa aminy, izay nandray anjara tamin’ny fanohanana ity taranja ity. Nanambara izy fa vonona hatrany ny hanampy an’ireo Malagasy mandray anjara amin’ny fampandrosoana tahaka ny federasiona ny ady totohondry izao.